DHEGEYSO: Haweenka uurka leh oo hal sabab darteed uga cabsanaya tallaalka Covid-19 (Sababta & waxa ka jira?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: Haweenka uurka leh oo hal sabab darteed uga cabsanaya tallaalka Covid-19...
DHEGEYSO: Haweenka uurka leh oo hal sabab darteed uga cabsanaya tallaalka Covid-19 (Sababta & waxa ka jira?)
(Hadalsame) 25 Nof 2021 – Haweenka uurka leh ayaa tiiyoo ay jirto inay halis wayn ugu jiraan inuu soo rito cudurka Covid-19 oo xitaa keeni kara inay ilmaha dhiciyaan misna haween badan oo uur lihi waxay ka meermeerayaan tallaalka cudurka.
Tusaale ahaan waloow marka ay isbitaallada soo booqdaan ay derbiyada ku xardhan yihiin ogaysiisyo cad oo dhiirri gelinaya in la is tallaalo misna haweenkii dhalay intii u dhaxaysey 1-26 bishii hore ee Oktoobar 2021, 40% unbaa is tallaalay, sida ku cad tirakoob uu sameeyey Maamulka Jönköpingslän.
Waxaa ka hadlaysa Ann-Sofie Brändström oo ah umuliso ku sugan isbitaal ku yaalla Galbeedka Jönköping.
“Waxa aannu maanta ognahay in aan tallaalku ilmaha uga gudbin mandheerta, balse saasoo ay tahay waalidiintu waxay ka baqayaan inuu ilmaha gaaro dhib joogto ah mana naqaan halka ay kala yimaadeen, ha yeeshee taasi ma jirto oo tallaalku wuxuuba dhowrayaa hooyada, ayay tiri.
Previous articleTOOS u daawo: Manchester City vs PSG, Atletico Madrid vs AC Milan, Liverpool vs FC Porto, Sheriff vs Real Madrid – LIVE (Shaxda Sugan)
Next articleMaxay AC Milan u baahan tahay si ay ugu soo baxdo wareegga 16-ka ee CL?!!